YaseSingapore | Iinkcukacha kunye neMbali
Isixeko-dolophu esinoqhankqalazo entliziyweni ye-Southeast Asia, iSingapore idume ngoqoqosho lwayo olukhulayo kunye nolawulo olunzulu lomthetho kunye nomyalelo. Elide ichweba elibalulekileyo lefowuni kwisekethe yezorhwebo yase-Indian Ocean, namhlanje iSingapore ibona ezinye iindawo ezinxweme zehlabathi, kunye nemigangatho ephathekayo yezemali kunye neenkonzo.
Isizwe esincinci sibe yintoni yezona zizityebi emhlabeni? Yintoni eyenza iSingapore uphawu?
Ngokomgaqo-siseko, iRiphabhliki yaseSingapore iyintando yesininzi yenkqubo yepalamente. Ngokwenza, iipolitiki zayo zilawulwa ngokupheleleyo yiqela elinye, i-People's Action Party (PAP), ukususela ngo-1959.
UNdunankulu uyinkokeli yeqela elithile ePalamente kwaye igosa igosa elilawulayo likarhulumente; UMongameli udlala indima enkulu njengenhloko yombuso, nangona unako ukuvota ukuqeshwa kwabagwebi abaphezulu. Okwangoku, uNdunankulu nguLee Hsien Loong, kunye noMongameli uTony Tan Keng Yam. UMongameli usebenza kwikota yesithandathu, ngelixa i-legislators isebenza ngeminyaka emihlanu.
Iphalamende ye-unicameral inezihlalo ezingama-87, kwaye ilawulwa ngamalungu ePAP amashumi eminyaka. Kuyathakazelisa ukuba kukho ezininzi njengamalungu ayisishiyagalolunye anyuliweyo, abaye balahlekelwa ngabaviwa bamaqela aphikisayo abaza kukufuphi ukunqoba ukhetho lwabo.
ISingapore ineenkqubo zemveli ezilula, ezenziwe yiNkundla ePhakamileyo, iNkundla yeziBheno, kunye neentlobo ezininzi zeeNkundla zoRhwebo. Abagwebi bamiselwa nguMongameli kwiingcebiso zikaNdunankulu.
I-dolophu yaseSingapore ibinabantu abayi-5,354,000, ephakamileyo kwi-intensity yabantu abangaphezu kwe-7,000 kwikhilomitha nganye (malunga ne-19,000 nganye ngekhilomitha nganye).
Enyanisweni, lizwe elinesithathu elinabantu abaninzi emhlabeni, landela indawo yaseTshayina yaseMacau naseMonaco.
Inani labantu baseSingapore lihluke kakhulu, kwaye abaninzi abahlali balo bangaphandle. Abangama-63% kuphela kubemi baseSingapore, ngoxa i-37% yabaqeshwa beendwendwe okanye abahlali basisigxina.
Abahlali baseSingapore bangama-74%, ama-13.4% angamaMalay, ama-9.2% angamaNdiya, kwaye malunga nama-3% ahlukeneyo okanye awamanye amaqela. Amanani obalo lwabantu abancinci, kuba kude kutshanje urhulumente uvumele kuphela abahlali ukuba bakhethe uhlanga olulodwa kwiifom zabo zobalo.
Nangona isiNgesi yilwimi esetyenziswa kakhulu eSingapore, isizwe sineelwimi ezine ezisemthethweni: isiShayina, isiMalay, isiNgesi nesiTamil . Ulwimi oluqhelekileyo ngolwimi lwesiTshayina, malunga ne-50% yabantu. Phantse 32% bathethe isiNgesi njengolwimi lwabo lokuqala, i-12% yamaMalay, kunye ne-3% yesiTamil.
Ngokucacileyo, ulwimi olubhaliweyo eSingapore luyinkimbinkimbi, enikwe iindidi zeelwimi ezisemthethweni. Iinkqubo zokubhala ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo ziquka iilatfabhethi zesiLatini, iimpawu zesiTshayina kunye nesicatshulwa saseTamil, esivela kwinkqubo yaseIndiya yaseBrahmi.
Inkolelo enkulu kunazo zonke eSingapore yiBuddha, malunga nama-43% abantu.
Uninzi lwamaMahayana Buddhist , ezinezimpande e-China, kodwa iTheravada neVajrayana Buddhism nazo zinamalungu amaninzi.
Phantse ama-15% aseSingapore angamaSulumane, ama-8.5% angamaTaoist, ama-5% amaKatolika kunye ne-4% yamaHindu. Amanye amahlelo angamaKristu angama-10%, ngelixa i-15% yabantu baseSingapore bengenanto yokhetho lwenkolo.
I-Singapore iyindawo yeSouth-mpuma ye-Asia, ukusuka kwicala elingasentla laseMalaysia , ngasentla kwe- Indonesia . Yenziwe ngamaqithi ahlukeneyo angama-63, eneendawo eziqhelekileyo ezingama-704khilomitha kwisikwere (iikhilomitha ezili-272 zeekwere). Isiqithi esikhulu kunazo zonke i-Pulau Ujong, ebizwa ngokuba yiSingapore Island.
ISingapore ixhunyiwe kwilizwe ngokubanzi ngeJohor-Singapore Causeway kunye ne-Tuas Second Link. Ingongoma ephantsi kakhulu yinqanaba lolwandle, ngelixa iqonga eliphezulu liyiBukit Timah ekuphakameni okuphakamileyo kweemitha ezili-166 (545 iinyawo).
Isimo sezulu saseSingapore sishushu, ngoko ukushisa akufani kakhulu kulo nyaka. Umyinge weqondo lokushisa uphakathi phakathi kwe-23 no-32 ° C (73 ukuya ku-90 ° F).
Imozulu ishushu kwaye ishushu. Kukho iinyanga ezimbini zemvula ezisileyo-Juni ukuya kuSeptemba, kwaye ngoDisemba ukuya kuMatshi. Nangona kunjalo, nangethuba leenyanga ezinyangeni, ivula imvula emini.
ISingapore ngenye yezona mpu melelo ze-Asian tiger eziphumelele kakhulu, nge-GDP nganye ye-$ 60,500 e-US, yesihlanu kwihlabathi. Isingeniso sokungabikho kwemisebenzi ngo-2011 sasinomthelela o-2%, kunye ne-80% yabasebenzi abaqeshwe kwiinkonzo kunye no-19.6% kwishishini.
I-Singapore ithumela ngaphandle i-electronics, izixhobo zonxibelelwano, amayeza, iikhemikhali kunye ne-petroleum ecocekileyo. Ingenisa iimveliso zokutya kunye neempahla zabathengi kodwa ine-surplus yorhwebo. Ukususela ngo-Oktobha 2012, izinga lokutshintshiselwa yi-$ 1 US = $ 1,2230 yaseRongor dollar.
Abantu bahlala kwiziqithi eziye zenza iSingapore ubuncinane ekuqaleni kwekhulu lesi-2 CE, kodwa into encinci iyaziwa malunga nembali yokuqala yendawo. UClaudius uPtolemaeus, umdwebi webalazwe waseGrike, wachaza isiqithi saseSingapore kwaye waqaphela ukuba yayiyindawo ebalulekileyo yokuhweba ngamazwe ngamazwe. Iimpawu zesiTshayina ziphawula ukuba kukho isiqithi esiyinhloko kwikhulu lesithathu kodwa inganikezeli iinkcukacha.
Ngowe-1320, uMbuso waseMongol wathumela abathunywa kwindawo ebizwa ngokuba yiLong Ya Men , okanye "iStake's Strait Strait", ekukholelwa ukuba yiSingapore Island. AmaMongolia ayefuna izindlovu. Emva kweminyaka elishumi, umqhubi waseTshayina uWang Dayuan wachaza inqaba yasePirate kunye nabemi baseTshayina nabaseMalay babizwa ngokuba nguDan Ma Xi , ukuguqulelwa kwakhe kwegama lesiMalaya elithi Tamasik (elisentsingiselo esithi "iPort Port").
Ngokuphathelele iSingapore ngokwayo, umxholo wayo osisiseko uthi kwinkulungwane yeshumi elinesithathu, isikhulu saseSrivijaya , esibizwa ngeSang Nila Utama okanye iSri Tri Buana, saqhekeka kwisiqithi. Wabona ingonyama apho okokuqala ngqa ebomini bakhe kwaye wathatha oku njengophawu lokuba kufuneka afumane isixeko esitsha, esithiwa igama elithi "Lion City" - iSingapura. Ngaphandle kokuba inkulu ikati yayinokuphekelwa yinqanawa apho, akunakwenzeka ukuba ibali liyinyaniso, kuba isiqithi sasingabakhweli kodwa ayiyizingonyama.
Kwiminyaka emithathu ezayo, iSingapore yatshintsha izandla phakathi kwe-Java aseJapapahit yoBukumkani kunye ne-Ayutthaya yoBukumkani eSiam (ngoku iThailand ). Ngekhulu le-16, iSingapore yaba yindawo ephambili yokuhweba kwiSultanate yaseJohor, esekelwe kwicala lasezantsi laseMalay Peninsula. Nangona kunjalo, ngowe-1613 amaPutukezi atshisa idolophu phantsi, kwaye iSingapore yashiya isaziso samazwe angamawaka amabini amabini.
Ngo-1819, iStamford Raffles yaseBrithani yasungula isixeko samanje saseSingapore njengesithuba sezorhwebo saseBritani kwi-Southeast Asia. Yaziwa ngokuba yi-Straits Settlements ngo-1826 waza wabizwa njengeCrown Colony yaseBritani ngo-1867.
IBrithani yaqhubeka ilawula iSingapore kwaze kwaba ngo-1942 xa i-Imperial Japanese Army yaqalisa ukuhlasela kwegazi kulesi siqithi njengenxalenye ye-Southern Expansion drive yayo kwiMfazwe Yehlabathi II. Umsebenzi waseJapan wada wahlala kude kube ngo-1945.
Ukulandela iMfazwe Yehlabathi Yesibili, iSingapore yathatha indlela ejikelezayo yokuzimela. AmaBrithani akholelwa ukuba i-Crown Colony yangaphambili yayincinci kakhulu ukuba isebenze njengelizwe elizimeleyo.
Nangona kunjalo, phakathi ko-1945 no-1962, iSingapore yafumana amanyathelo okwanda okuzimela, ekugqibeleni kwi-self-government ukusuka ngo-1955 ukuya ku-1962. Ngowe-1962, emva kokubhenwa komphakathi, iSingapore yajoyina iMalasian Federation. Nangona kunjalo, uhlanga olubulalayo lwasuka phakathi kwabemi baseTshayina nabaseMalay yaseSingapore ngo-1964, kwaye isiqithi savotela ngo-1965 ukuba sishiye kwi-Federation of Malaysia.
Ngowe-1965, iRiphabhuliki yaseSingapore yaba yinkqubo yokuzilawula ngokuzimeleyo, i-autonomous state. Nangona sele ijongene nobunzima, kubandakanywa iziganeko ezingaphezulu kweembambano ngo-1969 kunye neengxaki zezimali zase-East Asia ngo-1997, kuye kwabonisa ukuba isizwe esincinci esincinci nesincomekayo.
Indlela yokuvelisa i-ID ekhethekileyo kwi-PHP
I-Clever Restaurant Names Name Thatha Ukutya Ixesha leNqanaba elilandelayo
UFrank Lloyd Wright
Iimpawu zee-movie ze-Halloween